एनआईसी एशिया बैंकका चमत्कारिक सवारी कर्जा र घर जग्गा कर्जा” योजना सार्बजनिक
Tuesday, 11 Sep, 2018 6:04 PM
२६ भदौ काठमाडौ । एनआईसी एशिया बैंकले थप दुईवटा कर्जा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले “चमत्कारिक सवारी कर्जा र चमत्कारिक घर जग्गा कर्जा” सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले “एन आई सी एशियाको साँच्चै चमत्कार अब गर्नुहोस् आफ्नो सपना साकार” भन्ने नाराका साथ ल्याएको चमत्कारिक सवारी कर्जा योजनाबाट नयाँ गाडी लिन वा पुरानो सवारी साधन साट्न सकिने छ । अधिकतम१५ बर्षसम्मको कर्जा भुक्तानी अवधि रहेको यस योजनामा अति न्यून मासिक किस्ता रहने बैंकले जनाएको छ ।
यस योजनामा सवारीको मुल्य अनुसार मासिक रु ११,००० बाट नै किस्ता रकम सुरु हुने बैंकले जनाएको छ । आंशिक अथवा पूर्ण रुपमा बिना कुनै शुल्क पूर्व भुक्तानी गरी आफ्नो इच्छा अनुसार मासिक किस्ता र भुक्तानी अवधि परिवर्तन गर्न सकिने यस योजनामा मासिक ब्याजदर ०.९% मात्र रहने बैंकले जनाएको छ । घर जग्गा र सवारी दुवै कर्जा लिने ग्राहकहरुलाई विशेष छुटको ब्यवस्था रहेको यस कर्जामा प्रशासनिक सेवा शुल्कमा विशेष छुट रहेको र तत्कालै कर्जा स्विकृती हुने बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी “एन आई सी एशियाको साँच्चै चमत्कार, अब गर्नुहोस् आफ्नो सपना साकार” भन्ने नाराका साथ बैंकले ल्याएको चमत्कारिक घर जग्गा कर्जा योजनामा अधिकतम ५० वर्षसम्मको कर्जा भुक्तानी अवधि रहेको बैंकले जनाएको छ । यस योजनामा मासिक ०.९% ब्याजदर रहेको बैंकले जनाएको छ । यी दुवै कर्जा योजनाहरू बैंकका मुलुकभर रहेका २४४ वटै शाखा कार्यालयहरुबाट उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकको क्रय शक्ति अझ मजबुत बनाई गाडी चढ्ने तथा आफ्नो निजी घरमा बस्ने सपना यस योजनाले सजिलै पुरा गर्ने बैंकले जनाएको छ । हाल एनआईसी बैंक मुलुकभरका २४४ शाखा कार्यालय, २३८ एटिएम, १४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवं १८ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाई मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक बन्नसफल भएको छ । बैंकको वासलातको आकार रू.१८८ अर्ब भन्दा बढि पुगेको छ भने कुल निक्षेप करिब रू. १५९ अर्ब तथा कर्जा रू. १३२ अर्ब पुगि निजी क्षेत्रबाट स्थापित बैंकहरु मध्ये नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्न सफल भएको छ । बैंकमा ग्राहकको संख्या करिब १२ लाख भन्दा बढि रहेको छ ।